ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ရမလဲသိလား - Mibond စက်ပစ္စည်း
နေအိမ် / သတင်း / ဘလော့ / ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ရမလဲသိလား
views:100 Author:ဆိုက်ကို Editor ကို အချိန် Publish: 2021-09-13 မူလ:ဆိုက်ကို
ပုံမှန်အခြေအနေများတွင်တူးဖော်ခြင်းသည်ထုတ်ကုန်အပေါ်တွင်းပေါက်စေရန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန်အသုံးပြုသောအပြောင်းအလဲနဲ့နည်းလမ်းကိုရည်ညွှန်းသည်။ဥပမာအားဖြင့်လူတို့သည်ကျောက်စိမ်းကိုလုပ်ဆောင်သောအခါပထမ ဦး စွာသူတို့အသုံးပြုလိမ့်မည်စွမ်းအားRotary Tool ကြမ်းတမ်းသောကျောက်တုံးများကိုဖြတ်ရန်ကွဲပြားခြားနားသော -bits နှင့်အတူ, ထို့နောက်သုံးပါသေးငယ်သောStone Grinder သို့မဟုတ်လက်ကိုင်ကြိတ်ရန်ကိရိယာကြိတ်ဆုံကြိတ်ရန်, ထို့နောက်လူတို့သည်လည်ပင်းပေါ်တွင်ဆွဲထားရန်၎င်းတွင်အပေါက်တစ်တွင်းတူးပါ။ စျေးကွက်မှာရှိတယ်ကဲွကွာသောများအတွက်လေ့ကျင့်ကဲွကွာသောထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အသုံးပြုသည်Rotary Hammer Drillဟုတ်ပါတယ်, etcလျှပ်စစ် rotary tools များထို့အပြင်သစ်သား, သတ္တု, ပလပ်စတစ်, ပလပ်စတစ်, drywall ကဲ့သို့သောပျော့ပျောင်းသောပစ္စည်းများနှင့်ခက်ခဲသောပစ္စည်းများအပေါ်တူးဖော်နိုင်သည်မျက်နှာကျက်နောက် ... ပြီးတော့။Tသူကသင်ပူးတွဲရမယ်Rotary Tools များအတွက်ညာဘက် -bitsသို့မဟုတ်Power Stone Grinder,ကဲ့သို့Drill-bits သို့မဟုတ် router bits.Tကြက်မသင်လေ့ကျင့်ဖို့ဘယ်လိုသိတယ်? ဒီဆောင်းပါးမှာဒီဆောင်းပါးတချို့ကိုငါတို့ပြောပြမယ်။
1)အဓိကရွေ့လျားမှုပြောရန်, လေ့ကျင့်ခန်းနည်းနည်း၏ rotary ရွေ့လျားမှု0 င်ရိုးပတ်လည်အရာဖြတ်တောက်ခြင်းရွေ့လျားမှု.
2)အလယ်တန်းလှုပ်ရှားမှု, ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ပြောရန်, Axis တလျှောက်တွင်အလုပ်ခွင်သို့လေ့ကျင့်ခန်း၏ linear လှုပ်ရှားမှု။
တူးရန်လေ့ကျင့်ခန်း၏ဖွဲ့စည်းပုံတွင်အားနည်းချက်များကိုကြောင့်၎င်းသည်အလုပ်၏အရည်အသွေးကိုအကျိုးသက်ရောက်စေမည့်ထုတ်ကုန်၏လုပ်ငန်းစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းများပေါ်ရှိလက်ရာများကိုစွန့်ခွာသွားလိမ့်မည်။ တစ်စီးnd tသူကတိကျမှန်ကန်မှုကိုပြုပြင်ခြင်းသည်ယေဘုယျအားဖြင့် IT10 အောက်တွင်ရှိသည်။ မျက်နှာပြင်ကြမ်းတမ်းသည်Ra12.5μmအကြောင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကြမ်းတမ်းသောစက်အမျိုးအစားနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
1. Marking: Dranging မတိုင်မီဖြင့် druging လုပ်ခြင်းနှင့်အတူ Rotary tool ကို,သငျသညျပုံဆွဲလိုအပ်ချက်များကိုအညီထုတ်ကုန်အပေါ်အမှတ်အသားဆွဲသင့်ပါတယ်။In ဤနည်းဖြင့်၎င်းသည်မှားယွင်းသောအနေအထားကိုလေ့ကျင့်ရန်ရှောင်ရှားနိုင်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်, သင်တူးရန်အမှတ်အသားပြုရန်အထူးကိရိယာကိုအသုံးပြုရန်သင်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။ ပထမ ဦး စွာ,လိုအပ်ချက်အပေါက်၏အနေအထားကိုရှာပါ။AND အလယ်တန်းလိုင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းနှင့်တိကျသင့်သည်။
2. စစ်ဆေးရေးဇယားကွက်သို့မဟုတ်စစ်ဆေးရေးစက်ဝိုင်းကိုဆွဲယူပါ။ မှန်ကန်သောလိုင်းများကိုဆွဲပြီးနောက်တွင်ပိတ်ထားသောဇယားကွက်သို့မဟုတ်စစ်ဆေးရေးစက်ဝိုင်းကိုတွင်း၏အလယ်တန်းလိုင်းနှင့်အတူဆွဲထားသင့်သည်စဉ်တွင်းဒီတော့လမ်းကြောင်းတူးဖော်ဟု၎င်းသည် BOOONHOOL orientation ကိုပြင်ပေးနိုင်သည်။
3. Provecting နှင့် Punching: သက်ဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှုစတုရန်းသို့မဟုတ်စစ်ဆေးမှုကိုထုတ်ယူပြီးနောက်သင်ပထမ ဦး ဆုံးသေးငယ်တဲ့အစက်အပြောက်တစ်ခုပြုလုပ်သင့်သည်,ဟုလက်ဝါးကပ်တိုင်တွင်လက်ဝါးကပ်တိုင်ထိုးခြင်းမပြုမီလက်ဝါးကပ်တိုင်၏အလယ်တန်းလိုင်း၏လမ်းဆုံလမ်းခွ၌ရိုက်နှက်ခြင်းရှိမရှိသင်တွေ့နိုင်သည်သေးငယ်တဲ့ rotary tool ကို။
4. clamping: ပထမ ဦး စွာစက်စားပွဲတင်မျက်နှာပြင်ကိုသင်ဆေးမထိုးမီသန့်ရှင်းစေရန်ဆေးကြောခြင်းနှင့်ကွင်းပြင်မျက်နှာပြင်ကိုသုတ်သင့်သည်။ လိုအပ်ချက်အဖြစ် clamping ပြားချပ်ချပ်ဖြစ်သင့်သည်။
5. Driling: စမ်းသပ်ပြီးနောက်သင်နှင့်သင်တူးနိုင်သည်လက်ကိုင် rotary tool ကိုလိုအပ်သလို။ ဒါပေမဲ့သင် ... သင့်တယ်Skewing မှအပေါက်ဝင်ရိုးကိုရှောင်ရှားရန် Feed Force ကိုအာရုံစိုက်ပါ။
ပါဝါ Rotary Tool သေးငယ်တဲ့ကျောက်ကြိတ်စစ်ဆေးနေ လက်ကိုင်ကြိတ်ရန်ကိရိယာ လေ့ကျင့်ခန်းနည်းနည်း၏ rotary ရွေ့လျားမှု လျှပ်စစ် rotary tools များ Rotary Tools များအတွက်ညာဘက် -bits drinking bit နှင့်အတူ Rotary tool ကို လက်ကိုင် rotary tool ကို သေးငယ်တဲ့ rocary tool ကို Power Stone Grinder